ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကတ်ကြေးများအိတ်ငယ်များ၊ အိတ်များနှင့်ကလေးများ - Japan Scissors
ပင်မစာမျက်နှာ / ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကတ်ကြေးများအိတ်များ၊ / 1 ၏စာမျက်နှာ 2
လူပျိုသားရေ Scissor ကာကွယ်ပေးသည်
ဂျပန်ကတ်ကြေး $ 19.90 AUD $ 29.95 AUD
ဂျပန်ကတ်ကြေး $ 39.00 AUD $ 99.00 AUD
ဂျပန်ကတ်ကြေး $ 69.00 AUD $ 99.00 AUD
Japan Scissors - 5pcs - သားရေ Scissors Holster
ဂျပန်ကတ်ကြေး $ 149.00 AUD $ 199.00 AUD
ဂျပန်ကတ်ကြေး $ 14.99 AUD $ 59.00 AUD
Japan Scissors - 9pcs - အစိမ်းရောင်သားရေ Scissors Holster
အစိမ်းရောင်သားရေ Scissor ပိုက်ဆံအိတ်
ဂျပန်ကတ်ကြေး $ 49.00 AUD $ 99.00 AUD
ဂျပန်ကတ်ကြေး $ 99.00 AUD $ 149.00 AUD
6pcs - ပန်းရောင်သားရေကတ်ကြေးအိတ်
ဂျပန်ကတ်ကြေး $ 149.00 AUD
ဂျပန်ကတ်ကြေး မှ $ 149.00 AUD
10 Pieces ပရီမီယံသားရေ Scissor Case
ဂျပန်ကတ်ကြေး $ 239.00 AUD $ 299.00 AUD
Jaguar 4pcs ကတ်ကြေး
ဂျပန်ကတ်ကြေး $ 19.00 AUD $ 29.00 AUD
4pcs - အနက်ရောင်သားရေကတ်ကြေးအိတ်
Japan Scissors - 5pcs - အနက်ရောင်သားရေ Scissors Wallet
ဂျပန်ကတ်ကြေး $ 139.00 AUD $ 179.00 AUD
Japan Scissors - 8pcs - အနက်ရောင်သားရေ Scissors Wallet
ဂျပန်ကတ်ကြေး $ 199.00 AUD
ဂျပန်ကတ်ကြေး - 5pc - အညိုရောင်သားရေပိုက်ဆံအိတ်
ဂျပန်ကတ်ကြေး - 5pcs - အညိုရောင်သားရေကတ်ကြေး
Japan Scissors - 5pcs - လိမ္မော်ရောင်နှင့်အနက်ရောင်သားရေကတ်ကြေး
ဂျပန်ကတ်ကြေး $ 139.00 AUD $ 199.00 AUD
12pcs - ကတ်ကြေးကပ်ပိုက်ဆံအိတ်
4pcs - အနက်ရောင်ကွက်သားရေကတ်ကြေးကပ်အိတ်
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးကိုသင်ရှာဖွေနေပါသလား။ သင်၏ကတ်ကြေးများနှင့်ညှပ်များကိုသားရေအိတ်၊ အိတ်သို့မဟုတ် holster ဖြင့်ကာကွယ်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သြစတြေးလျား၌ ဆက်လက်၍ ကြီးထွားလာစေသောအကောင်းဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးရှိသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်အားဆံပင်ညှပ်ဆိုင်များ၊ အလှပြင်ဆိုင်များသို့မဟုတ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာ၊
ကွဲပြားခြားနားသောဆံပင်ကတ်ကြေးအိတ်များ, အိတ် & holsters
ဆံပင်အလှပြုပြင်သူ၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံသဆရာတိုင်းသည်သူတို့၏စျေးကြီးသောဆံပင်ကတ်ကြေးများကိုကာကွယ်ရန်အရေးကြီးကြောင်းကိုနားလည်သော်လည်း၊ မှန်ကန်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ရန်အမြဲတမ်းမလွယ်ကူပါ။
အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးပိုက်ဆံအိတ်၊ အိတ်သို့မဟုတ်အိတ်ကို ၀ ယ်တဲ့အခါသင်ဘယ်လိုစတင်သလဲ။
အကောင်းဆုံးအိတ်များ၊ အိတ်များနှင့်ပိုက်ဆံအိတ်များသည်သိုလှောင်နေစဉ်သင့်ကိုကတ်ကြေးများကိုအလွယ်တကူလုံခြုံစေရန်ခလုတ်များရှိသည်။ ကျိုးပဲ့သောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာကတ်ကြေးများအတွက်အသုံးအများဆုံးအကြောင်းမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။ ညှပ်သူများအနေဖြင့်အမှုမှဖယ်ထုတ်ပြီးမြေပြင်ပေါ်သို့ကျိုးပဲ့နိုင်သည်။
ဖြစ်ရပ်များ၊ အိတ်များနှင့် holsters အမျိုးအစားများတွင် -
ဆံပင်ညှပ်ခြင်းပညာရှင်များအတွက်၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း၊ holsters & pouches များသည်ဆောင်းရာသီအေးသောအချိန်များတွင်သင်၏လှပသောဆံပင်ညှပ်ဆံပင်ညှပ်များကိုနွေးထွေး။ သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီးလုံခြုံစေသည်။ ဆံပင်ညှပ်သမားများအတွက်ကတ်ကြေးများသင်၏လက်၏ချဲ့ထွင်မှုများ၊ ရိုးရှင်းသောတိကျမှုသို့မဟုတ်လုံးဝပုံစံအသစ် (ဆေးကြောခြင်း) အတွက်ဆေးသုတ်ထားသောဆံပင်ညှပ်သမားများနှင့်ဆံပင်ညှပ်အားလုံးသည်အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးလိုအပ်သည်။ အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးများသာမကလိုအပ်သောအကာအကွယ်နှင့်လက်တွေ့သိုလှောင်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ဤနေရာသည်ပရီမီယံသားရေထုတ်ကုန်များကစားရာနေရာဖြစ်သည်။
အတွေ့အကြုံရှိသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်နှင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်ကတ်ကြေးဝယ်ယူမှုကိုသတိမထားမိသည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ကတ်ကြေးများကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးချွန်ထက်။ လုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်သည်။ ကတ်ကြေးများအကာများ (ဥပမာအိတ်ငယ်များ၊ အိတ်များ၊ ချည်မျှင်စသည်) သည်သင်၏အလွန်ကောင်းမွန်သောဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းကိုသဘာဝအရာများမှကာကွယ်ပေးသောကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သားရေဓားများ၊ ဓားများ၊ မြှားခေါင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ချစ်သောဂျပန်ဖြတ်တောက်မှုညှပ်များဖြစ်သည့်ဖြတ်တောက်ခြင်းအနားများစွာအတွက်အသုံးပြုသောရိုးရာပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သားရေကတ်ကြေးများအိတ်ထဲတွင်ကောင်းမွန်သောရှုထောင့်များစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ရှိသည်။ လက်များကိုချစ်စရာကောင်းသောခံစားမှုဖြင့်ကြိုဆိုသည်။
သို့သော်အားလုံးသည်ကြီးကျယ်သောအသံဖြစ်သော်လည်းလက်တွေ့ကျသောရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်သားရေသည်သင်၏စျေးကြီးသောကတ်ကြေးများကိုမပျက်စီးစေဘဲတန်ဖိုးရှိသောဓါးကိုခြစ်ရာပစ်မည်မဟုတ်ပါ။ သားရေအနည်းငယ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်, ထိုကဲ့သို့သောသားရေအတုကဲ့သို့သောအခြားပစ္စည်းများ (ရက်စက်တယ်) အလွန်ပင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီးဓါးကိုအိမ်မှပတ် ၀ န်းကျင်တွင်မျိုသိပ်စေနိုင်သည်။ အလုပ်ရှုပ်နေသည့်နေ့၌သင်သည်သင်၏ကတ်ကြေးများတပ်ဆင်ထားသည်နှင့်ရှေ့သို့ပြေးနေသည့်အချိန်တွင်ဤသည်မှာသင်၏ဓါးများအတွက်နောက်ဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကတ်ကြေးများသည်သားရေကတ်ကြေးကပ်ထားသည့်အဖုံးအတွင်းသို့ခဲသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်ဓါးသွား၏ထက်မြက်မှုကိုမထိခိုက်ပါ။ အချို့သောအပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးများမှာသားရေမြည်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆူညံသံလျော့နည်းစေခြင်းဖြစ်သည်။ ပလတ်စတစ်ကတ်ကြေးများသည်သင့်ကတ်ကြေးများကိုတစ်ချိန်တည်းအတူတကွချိတ်ဆတ်ထားခြင်း၊ သားရေသည်တစ်နေ့လုံးချောမွတ်ခြင်းနှင့်တိတ်ဆိတ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပြီးအခြားအကြောင်းပြချက်များစွာကဲ့သို့ပင်မုဆိုးများသည်ယင်းတို့၏ဓားများကို ပို၍ နှစ်သက်ကြသည်။ ဆံပင်ညှပ်နေစဉ်နောက်ကျောကိုခိုးထွက်ပြီးကော်ဖီသောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်လုပ်ပါ။
သားရေနှင့်ပတ်သက်သည့်သတိပေးချက်တစ်ခုမှာသင်၏ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးများကဲ့သို့ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်သည်။ လှုပ်ရှားမှုကဲ့သို့ပင် gremlins သည်ရေကိုအလွန်အကျွံထိတွေ့ခြင်းကိုရှောင်ရှားပြီးသင်၏နွားမအနေဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာနေရန်ခွင့်မပြုပါက၎င်းသည်ခြောက်သွေ့။ ကွဲထွက်သွားနိုင်သည်။ ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပြီး ၆-၁၂ လတိုင်းသားရေအေးစက်သို့မဟုတ်ရေမွှေးသည်စိုထိုင်းမှုရှိပါကသင်သည်ရွှေရောင်ဖြစ်ပါ၏!
ကောင်းမွန်သောထိန်းသိမ်းထားသည့်သားရေကတ်ကြေးကပ်ထားသောခွေးငယ်လေးသည်ဂရုစိုက်မှုနှင့်ရိုသေလေးစားမှုဖြင့်ကုသမှုခံယူလျှင်တစ်သက်တာလုံးကြာရှည်ခံသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသားအရေကဲ့သို့ပင်အရေပြားအစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်းသည်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ကွဲအက်ခြင်းများကိုကာကွယ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးသင့်လက်များကဲ့သို့သားရေနှင့်တူအောင်နူးညံ့စွာပွတ်တိုက်သင့်သည်။ သားရေကတ်ကြေးများ holster သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဒီတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောကိရိယာကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေသည့်အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းမှုကိုစုပ်ယူလိမ့်မည်။
Japan Scissors တွင်သားရေအခွံအသစ်၊ holster သို့မဟုတ်အိတ်အသစ်များကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးစစ်မှန်သောသားရေအဖုံးများဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုးသတ်ဆေးပစ္စည်းများနှင့်ရှောင်ကြဉ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများအသုံးပြုခဲ့သည့်ပစ္စည်းများကိုသာအာရုံစိုက်သည်။ ဒြပ်စင်များနှင့်မတူဘဲပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပို၍ ကောင်းမွန်ရုံသာမကအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။
သင့်ရဲ့ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးတွေအတွက်သင့်တော်တဲ့ holster ကိုရှာဖွေတာလား။ မင်းနေရာမှန်ကိုရောက်ပြီ
အထက်ပါပုံများဖြင့်သင်သည်ရရှိနိုင်သည့်သားရေကတ်ကြေးအမျိုးအစားများကိုစိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ သင်ကိုယ်တိုင်အကာအကွယ်ပေးသည့်အမှုတစ်မျိုးတည်းကိုသာကန့်သတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ထိုပေါင်းစပ်မှုများကိုသင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သည့်ထူးခြားသောစတိုင်များနှင့်အင်္ကျီလက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။
တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်သင်သိုလှောင်လိုသောကတ်ကြေးဘယ်နှစ်လုံးနှင့်မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အချက်နှစ်ချက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ပေါ့ပါးသောအရာတစ်ခုနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုလိုချင်သည်ဆိုပါက holster သည်အကောင်းဆုံးကိစ္စဖြစ်သည်။
အပေါ်ကပုံအားလုံးမှာတွေ့နိုင်သလိုသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ကတ်ကြေးအမျိုးမျိုးနဲ့ကတ်ကြေးအမျိုးမျိုးပါ ၀ င်ပါတယ်။ သင်၏တင်ပါးဆုံရိုး၌သင်၏ကတ်ကြေးများပတ်ပတ်လည်ကိုသယ်ဆောင်ရန်စိတ်ကူးသည်သင့်အတွက်မဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်သားရေအိတ်များနှင့်အိတ်များပါရှိသည်။
ဤအကတ်ကြေးများအိတ်များနှင့်အိတ်ငယ်များတွင်ဆံပင်ညှပ်နေစဉ်လက်တွေ့ကျကျရွေ့လျားနိုင်မှုမရှိသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံး၏အရေးအပါဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်သည်။ သင်၏အဖိုးတန်သောကတ်ကြေးများကိုလုံခြုံစိတ်ချရစေသည်။ ကတ်ကြေးတံဆိပ်များနှင့်ဆင်တူသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့်အိတ်များနှင့်အိတ်များဒီဇိုင်းများရှိသည်။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်နေ ၀ င်နေပြီးသင်ပင်ပန်းနေသည့်အချိန်တွင်သင်စိုးရိမ်ပူပန်လိုသောအချက်မှာ“ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စျေးကြီးသောညှပ်များကို၎င်းတို့အားဆုတ်ဖြဲခြင်းသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုကိုဆန့်ခြင်းဖြင့်ခြစ်ခြင်းဖြင့်ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီလား” ။ အဆိုပါအခက်အခဲများနှင့်ဒရာမာကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးယနေ့သူတို့ကိုကာကွယ်ပေး! ဒုတိယအကောင်းဆုံး pleather ထုတ်ကုန်များအတွက်မမြုပ်ပါနှင့်။ သင်၏စုတ်တံသည်သင်၏လက်မှုပညာကိုမည်သို့ဆက်သွယ်သည်၊ လုံခြုံမှုရှိစေရန်သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။ သို့မဟုတ်ပါကသင်၏ပတ္တူတွင်ပြလိမ့်မည်။